Buka: IFree State iyona ehamba phambili ngemiphumela kamatikuletsheni | News24
Buka: IFree State iyona ehamba phambili ngemiphumela kamatikuletsheni
eThekwini -UNgqongqoshe weMfundo ePhansi u-Angie Motshekga useqalile ukwethula inkulumo yakhe njengoba ezokwethula imiphumela kamatikuletsheni yango-2017.
UMotshekga uthi ukukhishwa kwale miphumela kubalulekile njengoba kubonisa wonke umuntu intuthuko eyenzekile kwezemfundo nokuthi yiziphi izingqinamba ezinkulu okusamele zixazululwe.
Lo Ngqongqoshe uthe babengu-802 431 abafundi abebebhalisele izivivinyo zikamatikuletsheni, bengu-629 155 abafunda ngokuphelele, bangu-173 276 abangafundi ngokuphelele kanti bangu-107 430 abafundi abadluliselwe phambili.
Uthi kumele kubhekwa nanokuthi izwe ngabe liyathuthuka na ekusabalaliseni imfundo esezingeni eliphezulu nokuthi ngabe ikhona na intuthuko ekufundisena nasekufundeni ezikoleni, ukuphatha kwabothishanhloko kanye nokubambisana kwabazali nezikole.
Zingu-115 izikole ezithole imiphumela engu-100%, kanti isifundazwe saseFree State yisona esiphumephambili ngokusebenza kahle.